CNC lathe rafitra fikojakojana servo fahana olana - China Changzhou Zhanhang International
Rehefa mihetsika ny fahana mihoatra ny fetran'ny rindrambaiko napetraky ny rindrankajy na ny fitaovana voafetra tapa-kevitra ny fetra jiro, ny overtravel fanairana hitranga, ary afa-po ny fanairana dia aseho ao amin'ny CRT. Araka ny rafitra CNC boky, ny fahadisoana azo intsony. , Asandrato ny overtravel.
Amin'ny ankapobeny noho ny anton-javatra toy ny mahantra lubrication ny fahana rojo, ambany dia ambany ny vola aman-karena tafahoatra servo rafitra sy ny enta-mavesatra. Indrindra indrindra, ny efa voavitrana ny servo sy ny baolina visy fifandraisana dia mety hahatonga ny baolina visy hanodinana ny na ny servo fihodinan'ny ho unsynchronized noho ny fifandraisana mahamenatra na ny kilema amin'ny efa voavitrana mihitsy, toy ny triatra. Fast sy miadana, ka mahatonga mikisaka.
Misy toe-javatra nandritra ny mamahana ny fanonjany. Ny mety ho antony dia toy izao manaraka izao: 1. Ny alalan'ny terminal ao mahantra fifandraisana, toy ny screws mahamenatra; 2. Ny toerana fanaraha-maso ny famantarana dia voahelingelina; 3. Ny hafainganam-pandeha faneva fandrefesana, miovaova, toy ny hafainganam-pandeha fitaovana fandrefesana tsy fahombiazana ary haingana feedback. Famantarana fitsabahana, sns Raha ny misafotofoto mitranga amin'izao fotoana izao ny handroso sy mamadika ny hetsika, dia amin'ny ankapobeny vokatry ny valifaty ny fahana lamasinina na ny rafitra servo tombony ho lehibe loatra.
1.4 be loatra
Rehefa ny enta-mavesatra ny fahana lehibe mihetsika loatra, ny fikirana sehatra tsy mety, ny tsara sy ny ratsy matetika hetsika, ary ny toe-lubrication ny fahana fifindran'ny rojo mahantra, ny fahadisoana be loatra no ho vokatry. Io dia matetika voan'ny tsiny ny milina mihitsy ary mampiseho ny be loatra, na overcurrent overheat fanairana ny CRT fampisehoana. Mandritra izany fotoana izany, ny fahana servo Module, ny famantarana mazava na nomerika Tube no ampiasaina mba maneho fanairana vaovao toy ny be loatra sy ny amin'izao fotoana izao ny rafitra fiara.
1.5 Servo maotera tsy miala
Izany no nahatonga tsiny, raha ny hafainganam-pandeha, toerana fanaraha-maso ny famantarana dia tsy Output, na ny afaka faneva (izany hoe, ny servo afaka tsato-kazo famantarana, + matetika DC 24V fifandimbiasana coil malefaka) dia tsy niova tamin'ny fiara sy ny fahana sampana no diso. Amin'izao fotoana izao, dia ilaina ny handrefesana na ny tsato-kazo famantarana ny baiko Output alalan'ny terminal ny isa fanaraha-maso ny fitaovana Ara-dalàna, hitandrina ny I / O toerana amin'ny alalan'ny CRT, handinika ny plc tohatra sary (na mikoriana tabilao) ny milina fitaovana mamaritra ny toe-javatra nisy nanomboka ny fahana mpiray izy sady hitandrina na lubrication, hihena, sns mahafa-po. Raha ny fahana sampana ho levona mandrakizay ny fiara, ny fifanakalozana fomba azo ampiasaina mba hamaritana raha mifanaraka sampana no diso.
2 Typical tranga mahazatra famakafakana ny fahadisoana eo amin'ny rafi-fahana servo
(1) A machining foibe fitaovana ny FANUC 7m rafitra, nandritra ny dingana sakafo, dia nahita fa ny Y-mpiray manana hovitrovitra.
Mba hamaritana ny antony mahatonga ny ny fahadisoana, ny milina fomba fandidiana dia napetraka tao amin'ny boky fomba, sy ny Y-mpiray fahana dia fehezin'ny tanana gropy fitepon'ny fony, ary hita fa ny Y-mpiray mbola nanana hovitrovitra. Raha io fomba io, rehefa ela ny hetsika, ny OVC fanairana mazava ny Y-mpiray haingana Manazava ny sampana. Misy dia nanaporofo fa amin'izao fotoana izao ny eo-fanairana no nitranga tao amin'ny Y-mpiray servo fiara. Araka ny toe-javatra etsy ambony, ny mety ho antony ny fanadihadiana dia toy izao manaraka izao:
1 moto be loatra mavesatra loatra; 2 milina fandefasana rafitra dia malahelo; 3 toerana tombony loatra manome fitoerana avo; 4 servo maotera ny ratsy, sy ny sisa.
Ny fomba fikojakojana ny fifanakalozan-mampiasa fomba manamafy fa ny foto-kevitry ny fahadisoana eo amin'ny DC servo maotera. Rehefa Y-mpiray maotera nesorina, dia hita fa ny iray tamin'izy roa lahy, borosy efa tsofina, dia mahatonga ny armature amin'izao fotoana izao mba ho mifandanja sy ny maotera Torque Output ho mifandanja. Ankoatra izany, dia hita fa ny mitondra ny maotera koa simba, amin 'izany ka mahatonga hovitrovitra sy overcurrent ny -axis. Rehefa avy fanoloana ny maotera bearings sy ny borosy, ny milina miverina amin'ny ara-dalàna.
(2) A machining foibe manohana ny FANUC 6ME rafitra. Ny hafainganam-pandeha ny lavaka, miovaova mandritra ny hetsika. Nandritra ny hetsika ho amin'ny mijanona, lehibe amplitude oscillation mitranga amin'ny nijanona toerana, ary indraindray ny toerany tsy azo vita, ary ny milina tsy maintsy atsahatra dieny mbola tsy azo miasa indray.
Fanadihadiana sy ny fanodinana: fijerena amim-pitandremana ny hovitrovitra ny milina fitaovana, dia nahita fa ny X-mpiray oscillation matetika dia ambany, ary tsy misy feo hafahafa. Avy amin'ny fomba fijery ny oscillation tranga, ny fahadisoana tranga dia mifandray amin'ny fikirana fametrahana ny rafitra manome fitoerana mihidy-, toy ny hoe: ny rafitra sehatra tombony loatra ny hahavony, ary ny fotoana manontolo tsy tapaka dia nametraka lehibe loatra.
CNC lathe mpanamboatra
Ny fikirana fametrahana ny rafitra fisafoana, ny harena ny servo fiara, sy ny fanitsiana ny fotoana manontolo potentiometer rehetra araka ny tokony isan-karazany ary tanteraka mifanaraka amin'ny fanitsiana eo anoloan'ny tsiny. Noho izany, dia azo tsaraina preliminarily fa ny oscillation ny lavaka dia miankina amin'ny toerana sy ny fanitsiana ny masontsivana. Mba hanamarina bebe kokoa, eo ambony ireo masontsivana nanitsy indray ka naka fanahy eo ambany horaisintsika nanoratra tany am-boalohany nandritra ny fikojakojana fanitsiana sarobidy, ary hita fa mbola nisy ny fahadisoana, izay voaporofo ny correct ny fitsarana.